avylavitra · Septambra 2013 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Septambra, 2013
Editor/Translator for Lingua Malagasy · Nanomboka nandika tamin'ny 10 Marsa 2008 · 2671 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Septambra, 2013
Afrika Mainty30 Septambra 2013
Queer Pakistan Voabahana: Sabatra Roa Lelan'ny Fandrakofam-Baovaon'ireo Media Ve?
Pakistana30 Septambra 2013
Nobahanan'ireo manampahefana ny tranonkala iray vaovao vao avy natomboka ho fanohanana ireo LGBT ao Pakistana. Voan'ny lazany ihany va re ny Queer Pakistan?
Amerika Latina28 Septambra 2013
Tao anatin'ny fotoam-pivavahana notarihan'ilay pastora sady mpikambana ao amin'ny kaongresy Marco Feliciano, vehivavy roa nifanoroka tao anatin'ilay hetsika no nosamborina.
Loza Mananontanona Ny Kianjan'i Tokyo Ny Lalao Olaimpika Hazakazaka Vohy Làkana
Azia Atsinanana28 Septambra 2013
Maminavina ny hanorina kianja fanaovana fifaninanana mitaingin-dàkana ho an'ny lalao Olaimpika Tokyo 2020 eo i Tokyo sy ny Kaomity Olaimpika Japoney, na teo aza ireo 25 tana nanaovan'ny Kianja Kasai Rinkai ezaka fifanantonana hamerenana indray ny fahasamihafàn'ny zava-miaina efa very tao noho ny fandrosoana sy ny fandotoana.
Amerika Latina25 Septambra 2013
Azia Atsimo25 Septambra 2013